विकास उन्मुख राजनिती अबको आवश्यकता : नेतृ सिंह | newdnn.com
विकास उन्मुख राजनिती अबको आवश्यकता : नेतृ सिंह
१३,आईतवार १७:१८ newdnn.com
– मध्य नेपाल।
जिल्ला महोत्तरी ईटहरवाकट्टी गा.वि.स–१ बस्ने बुबा ललितकिसोर साह र आमा शैलदेवी सिंहको दाम्पत्य जिवनबाट २०४३ साल असोज १५ गते जन्मेकी मोनिका सिंह हाल वी.उ.म.न.पा–१० बस्ने साहेब सिंहको पत्नीको रुपमा रहनु भएको छ । सिंह वीरगंजको लागि नयाँ अनुहार भए पनि आफँुलाई वीरगंजमा चिनाउन सफल भएकी महिला नेतृ पनि हो । नेतृ मोनिका सिंह त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट एम.एड सम्म अध्ययन गरी हाल जीवन ज्योति प्लस टु साइन्स पिरामिड एकेडेमीमा अंग्रेजी बिषयको प्राध्यापक भई अझ नेपालको बद्लिदो परिस्थितिमा आफुलाई शिक्षा र राजनीतीमा स्थापित गर्नलाई डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नयाँशक्ति नेपालको अन्तरिम केन्द्रिय पार्षद रही राजनीतिमा आफनो भूमिका सक्रिय रुपमा निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ । मध्य नेपाल सन्देशका लागि नेतृ मोनिका सिंहसगँ गरिएको सक्षिंप्त कुराकानीः
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्ध तपाईको भनाई के छ ?
–अन्योलको स्थिति छ । सही नेतृत्व वर्गको अभाव छ । जो देशको लागि काम गरोस् । राजनेता कोही भएन् । व्यक्तिगत फाईदा र पार्टीको लागि काम गरेको तर देशको हितको लागि काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट फुटेर बनेको नयाँशक्ति नेपालको अवधारणा के छ ?
–देशको हितमा र विकास मुख्य एजेन्डा हो । २०४६ सालदेखि हालसम्म हामी अधिकारका लागि लडिरहेका छौ । नेपाल चाहि अल्प विकसित देश हो । देशमा विभिन्न समयमा अधिकारको लागि आन्दोलन भए पनि अब विकासको लागि सर्घष गर्नुपर्छ । नेपालमा विकासको संभावना ठूलो रहे पनि राजनीतिक पार्टीले सो कार्य नगरेकोले अबको बाँकी काम हाम्रो पार्टीले गर्ने छ ।
तपाईको पार्टीको मधेस प्रतिको दृष्टिकोण के छ ?
–हामी सब बराबर छौं । अरु पार्टीमा १२.२ बाहुन छन् । एमालेमा पनि उसैको बाहुबली छ । प्रयोग मात्र गर्छन । कुरा सुन्दैनन् । कंग्रेसमा पनि १६.६ क्षेत्रीहरु छन् । ठूलो–ठूलो मिडिया क्षेत्रमा पनि कंग्रेसकै बाहुबली छ । नम्बर गनाउनलाई भोट लिन्छन् ,र कुरा सुन्दैनन् । समस्यालाई हल गर्दैनन् योे गलत हो । किनकी १७ प्रतिशत मधेसको भू–भाग हो । अन्नको भण्डार सावित यसले पुरा नेपाललाई खुवाएर थप अन्न सप्लाई गरेर विकासमा ध्यानदियो भने पुरा देश नै धनी हुन्छ । यो कुरा नयाँशक्तिले बुभm्छ ।
तपाई कसको प्रेरणाबाट राजनीतिमा आइपुग्नु भयो ?
–मेरो परिवार राजनीतिबाट धेरै टाढा भए पनि मेरो नानाजी भारतको स्वतन्त्रता सेनानी हुनुभएकोमा सायद त्यही बल्र्डको कारणले म राजनीतिमा लागि परें । तत पश्चात मधेस आन्दोलन हेर्दा–हेर्दै र श्रोताको रुपमा हेर्दै बुझदै म आफै नै प्रेरित भई देश विकासको निमित्त राजनीतिमा लागें ।
शिक्षा पेशा र राजनीतिमा के भिन्नता पाउनु भएको छ ।
— शिक्षा हुन त एउटा पेशा जस्तो हाम्रो देशमा लिइरहेको छ । किनकि हामीहरु पढाउने र पैसा कमाउने प्रोफेसन जस्तो छ । त्यसमा पनि अलि सेवाभाव हुनुपर्छ । तर राजनीति चाही पेशा हुनु हुदैन र छैन पनि । त्यो चाही सेवा नै हो । भिन्नता धेरै नै छ । हुन त हाम्रो देशमा बढी शिक्षक र प्रोफेसरलाई मान्ने गरिन्छ । मलाई त लाग्दछ राजनीतिक वर्ग वढी शिक्षित हुनुपर्छ । उसलाई पूरा देश नै चलाउनु पर्दछ । र फरक–फरक फिल्डको ज्ञान हुनुपर्छ । शिक्षण पेशा त्यो सिमित हो । तर राजनीति पेशामा ठूलो फराकिलो छ । राजनीति गर्नु र टिचिङ्ग गर्नुमा राजनीति धेरै गा¥हो छ ।
यो सविंधान कार्यान्वयन होला त ? हुन्छ भने यसको आधार के–के छ ?
–जब सम्म मधेसी र जनजातीहरुको माग पुरा हुदैन, तब सम्म कार्यान्वयन हुदैन । जर्बरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि २००७ साल देखिको हालसम्म हरेक १० वर्षमा परिवर्तन भएको अस्थिरताको कारण त्यही हो ।
यदि सबैलाई समेटेर गयो भने अवश्यक कार्यान्वयन हुन्छ । तर त्यही पनि समय लाग्छ । एक त यो सविंधानबाट कोही खुशी छ भने १२.२ प्रतिशत बाहुन, क्षेत्री त्यसमा पनि पुरा बाहुन क्षेत्री सन्तुष्टि छैनन् । ३१ प्रतिशतको लागि हो भने यो संविधान धेरै रजाई गर्ने खालको छ । र जसमा मधेसी, जनजाती धेरै पिछ्डीएका वर्गहरुको चाही राम्रो स्थिती छैन । यो अन्तरिम संविधान जे राखिएको थियो । त्यसमा सन्तुष्टि थियो । त्यसमा केही हल्ला थिएन् । कसैको विमती थिएन । १वर्ष भैसक्यो कति कानून बनायो त ? काहाँ कार्यान्वयन भयो त?
तपाई शिक्षा पेशाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–शिक्षण पेशा बाट म त सन्तुष्ट छु । आफनो कामदेखि सन्तुष्ट पढ्न पढाउन मजा आउँछ । मन लागिरहेको छ । यो पेशाबाट एकलै घर धान्न गाहूो छ । त्यसैले भ्अयलयmष्अब िउयष्लत या खष्भध ले सन्तुष्टि छैन । म पैसाको पछाडी जादिँन । मलाई पैसा चाहिन्दैन ।
वीरंगजमा विश्व विद्यालयको आवश्यकता छ कि छैन ? स्पष्ट पारिदिनुस् ।
–वीरगंजमा विश्व विद्यालयको एकदम जरुरी छ र हुनुपर्छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, सर्लाही र महोत्तरी सम्मका विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत रकममा पढ्न पाउने अवसर पाउनेछन् । सबभन्दा बढी उपलब्धी यस भेगका महिलाहरुलाई हुने भएकोले वीरगंजमा विश्व विद्यालय हुनुपर्छ । आजसम्म यस भेगको जनतालाई अप्ठ्यारोमा बनाएको कारणले गर्दा अब यो विभेदकारी नीति हटाई यस क्षेत्रमा विश्व विद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ ।